Sayenzi nezvakavanzika zvinyorwa - afrikhepri nheyo
kugashira Kategori SAYENYERI NEMISSTERI
Ormus, iyo alchemical monoatomic goridhe yekumutsa uye kubatanidzazve kune mamwe nyika
ELMES zvinonyatsotsanangurwa se "zvinhu zvinoshamisa". Hupenyu hwavo, kunyange hazvo husina kusimbiswa nenharaunda yesainzi, hwaipupurira kuchina chimiro chechinhu chisiri nekutsanangurwa, ...
Kugadzirwa kwepiramidhi reCheops kwakazotsanangurwa?
Uchishandisa 3D CAD nedhijitari simulation zvishandiso, iyo huru piramidhi yakagadzirwazve, kuitira kuti ishandise yakashinga hypothesis: ingadai i ...
Mamiwata amai vemvura
MamiWata inouya kubva "Amai mvura", nekukurumidza kushandurwa kuita "Mommy Mvura", uye vozoita "Mammy mvura", uye pakupedzisira mu "MamiWata". Mamiwata ndiAmai emvura, hafu mukadzi hafu yehove, hafu yepasi pano yemvura, mwari wevodun cult mu ...
Masayendisiti akawana huvepo hwenyika dzakafanana
Quantum fizikisi ndeyechokwadi yakaoma. Zvinoenderana nemirairo yayo, munhu anogona semuenzaniso ane katsi iyo yaingave panguva imwechete yakafa uye iri mhenyu kutozosvikira munhu anogona kuichengeta zvakananga ....
Mashoko akanaka: Neural transplant zvino inogoneka
Bato raFranco-Belgian richangogadzirisa iyo cortex yeguru yemurume nekuda kwekutapurirana kwema neurons anotorwa kubva kumametoni e-embryonic stem cell. Pakupedzisira, chiitiko chinomiririra tariro ye ...
Pamusoro pekucheka - Documentary (2012)
David Icke anotaura mumusangano uyu nezve maitiro ekunzwisisa mashandiro ekuziva.
Munyika yakarashika, nhema kana chokwadi?
Iyo nyaya yekuparadzwa kweMu, nyika yemunhu, inoshamisa kwazvo, muchokwadi. Inotipa mhinduro yechakavanzika cheyakachena tsvina yemakungwa e ...
David Icke - Zvitendero (Mavambo & Zviratidzo)
David Icke ave achizivikanwa kubvira 1990 nekuve ave, mumashoko ake ega, "wenguva yakazara muongorori kune avo vanonyatso kutonga nyika."
Chiporofita CheBhaibheri - Iyo RFID chip pasi peganda rekutonga kwehuwandu
Sekureva kwehurongwa hwevamiriri vedzimwe nyika mari dzese (mari yemapepa uye masimbi esimbi) dzinonyangarika zvachose kutsiviwa nemari yemagetsi inozotanga kushandiswa nenzira ...
Masimba makuru europi hwedu: Terepathy, pfungwa yechitanhatu, hypnosis
Uye kana isu taive ne chipo chekugona kuverenga mifungo, kutarisa kune rumwe rutivi rwepasi nekukurumidza, uye kana uropi hwedu ...
David Icke kubvunzana naAlex Jones
David Icke mutori venhau wemitambo uye aimbove nhengo yeBritish Green Party. Iye anofungidzirwa kuve rangano theorist.
Iko kuziva uye ruzivo rwechikoro chezvakavanzika uye pamweya
Isu tiri kuenda kuburikidza neiri chirevo kutora kufarira mune zvese zviratidzo shure kweziso ra Horus. Mafashama asati aitika, rubudiriro runodaidzwa kunzi Atlanteans rwakanga rwuri pamusoro, zvakare ...
VANARCHARCH ANNOUNCE VAKANGA VAKABATSIRA KAP KUSAONA
Makore 9 apfuura, muna Gumiguru 2006, David R. Smith nechikwata chake kubva kuDuke University vakashamisika nyika yese nekuratidzira chishandiso chekutanga munyika, chinogona ...